अर्काको जीवनसँग गम्भीर खेलवाड गर्नेलाई जेल सजाय गर्दा राम्राे हाेला – KhabarKhurak
जरिवाना बढाउँदैमा दुर्घटना न्यूनिकरण हुँदैन
काठमाण्डौ, १३ पुस । बढ्दो दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि राज्यले नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । चालकको लापरवाही नै दुर्घटनाको मुख्य कारकका रुपमा देखा पर्दै आएका कारण जरिवाना दर वृद्धि गर्ने दिशामा छलफल भइरहेको छ । कतिपयले सवारी नियम उल्लंघनमा जरिवाना दर बढाउनुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । यद्यपि सवारी नियम उल्लंघनकर्तालाई जरिवाना दर वृद्धिले मात्र निरुत्साहित गर्न सकिएला ? जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने परिस्थितिले पैसावालहरुलाई ‘कारवाही’को अनुभूति गराउन सक्ला ? दुर्घटना न्यूनिकरणको लक्ष्यलाई जरिवाना दरमा वृद्धिले कति सहयोग पुग्ला ? नीति निर्माण अघि हामीले यस्ता विषयमा गहन अध्ययन र विचार गर्नु उचित देखिन्छ ।
जरिवानामात्रले अब ट्राफिक नियम पालनामा चालकहरुलाई गम्भीर र जिम्मेवार बनाउन सम्भव नहुने अवस्था देखिएको छ । किनकि, सम्पन्न परिवारमा सुविधाका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । निश्चित रकम तिरेर घर बसीबसी एजेन्टमार्फत पानी–बत्तीको बिल भुक्तानीगर्ने जस्ता प्रवृत्ति बढेको समाजमा हामीले निश्चित रकम तिरेकै आधारमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्न पाउने सुविधामात्रले सडक अनुशासन कायम राख्न सम्भव हुँदैन । दुर्घटना न्यूनिकरण, ट्राफिक नियम पालना नै हाम्रो मुख्य ध्येय हो भने हामीले सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवानाका साथसाथै सजायको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
यस्तै रुट अनुमतिपत्र विना सार्वजनिक सवारी चलाएको पाइएमा पनि कठोर दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्षमताभन्दा बढी यात्रु गणना गरी प्रति यात्रु न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
प्याजको भाउ बढे संगै सर्वसाधारणले प्याज खान छाडे